Warbixin: Soomaaliya Iyo Itoobiya, Ma Cadaw Mise Saxiibo?!! – Hornafrik Media Network
In kasta oo ay jiraan dad ay dhibeyso xusidda loolanka iyo cadawtinnimada taariikhiga ah ee Soomaaliya iyo Itoobiya, in kasta oo ay dadka ku nool gobollda Soomaali galbeed ku doodayaan in ay yihiin Itoobiyaan, In kasta oo dowladaha iyo labada maamullada ee hadda jira uu xiriirkoodu wanaagsan yahay, Laakin taasi kama dhigna xaqiiqda oo dhameystiran, waxaa jiray, oo hadda jira ama jiri donna loolan iyo cadawtinnimo Taariikhiga ah oo labada dhinac ah!
July 20, 2007-dii, Waxaaa dhanka Soomaaliya u soo dhaqaaqay Itoobiya iyagoo qabsaday magaalooyin badan sida Beledweyn, Jowhar, Buurhakaba, Deynuunay, ilaa ay Muqdishu gacantoodu gasho December 28, 2006-dii, laakin iska caabin dagaalo lagu hoobtgay kadib waxaa ay dalka ka baxday January 5, 2009-kii.
Hadda, dhiibitaanka Cabdikarim Qalbi-dhagax waxaa ay su’aalo badan ka keentay heerka loolanka uu gaaray, cidda awoodda leh iyo sida ay dowladda Soomaaliya uga tarjumi karto rajada Somaliweyn.
Golaha Wasiiradda oo Shir Deg Deg ah ka yeelanaya Fadeexadii Qalbidhagax, Go’aanana soo saaraya.
Dowladda Somalia oo si rasmiya u qiratay inay Itoobiya ku wareejisay Qalbidhagax. una aqoonsatay ONLF Argagixiso+Daawo